Kiniiniga funkku leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa gudaha dhismaha! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » TECH & TELECOM Kiniiniga funkku leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa gudaha dhismaha!
TUSAALE KU SAABSAN PROJECTOR
Faa'iidada aan la iska qaadin ee Yoga Tab 3 waa in uu leeyahaymashruuc isku dhafan kacaan. Iyada oo middani, waxaad bedeli kartaa qolka aad ku nooshahay indhaha isha, wuxuuna kuu kaxeyn doonaa filimka. Masaafada udhexeysa filinka iyo derbiga ama dusha sare waa mitirka 1,5, laakiin waxaad tagi kartaa 1,78. Marka nidaamka leh qalabka lagu xiro, waxaad kaliya ku raaxeysaneysaa filimaantaada iyo taxanahaaga.
Ma aha in la sheego, dabcan, sanqad leh lagama maarmaanka u ah dib u furida jawiga shineemada. Afar ballaaran oo JBL ah oo ku hadla ayaa la dhisay oo waxaad ku maqli doontaa dhawaaq cad, oo firfircoon oo loogu talagalay waayo-aragnimada ugu dambeysa ee fiidiyowga.
WAQTIGA WAXAY TAHAY IN AAD U BAAHAN TAHAY
Kiniiniga Lenovo ee halkan lagu muujiyay ayaa cabbiraya 10 inches waxayna leedahay xal Quad HD, oo ku haboon in lagu faafiyo webka iyo ciyaarida ciyaaraha aad jeceshahay. Iftiiminta iyo midabyada waxay ku yaalaan qaab-dhismeedka iyo damaanad qaadka tayo sare leh!
Waxaad haysataa ikhtiyaarka si aad u aragto mawduucaaga mawduucyada: si toos ah kiniinka ama adigoo isticmaalaya mashruuc soo celiya.
WAXQABAD DEG DEG AH
Yoga Tab 3 wuxuu leeyahay 4 GB RAM, iyo xusuusta 64 GB. Laakiin tayada sare waa shaki la'aan madaxbannaani yaa gaari kara saacadood 18 dhammaystir! Ma jiri doonto dhibaatooyin batariyiin dheeraad ah marka aad fiidiyeyneyso daawashada!
Maqaalkani wuxuu marka hore u muuqday: https: //dailygeekshow.com/tablet-tactile-lenovo-projector/